सुत्नेसमयमा भोली जेठ १९ गते राशिअनुसारको भाग्यफल - Muldhar Post
सुत्नेसमयमा भोली जेठ १९ गते राशिअनुसारको भाग्यफल
भोलीको राशिफल २०७६, १८ जेष्ठ शनिबार 787 पटक हेरिएको
भोली मिति २०७६ साल जेठ महिनाको १९ गते आइतबार । अंग्रेजी पात्रो अनुसार २०१९ अप्रिल महिनाको २
बृष– आजबाट खराब र दिक्क लाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ, अब हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुनेछ । दिउँसोबाट तपाईंका असन्तुष्टि समाप्त हुनेछन् । अधुरा कामहरू पूर्ण हुन थाल्नेछन् । स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार हुनेछ । आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रिय बन्नु पर्नेछ । वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । मिथुन– सुरुमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक कार्यक्रममा संलग्न हुनुपर्नेछ । विशेष ज्ञानको उदय हुनसक्छ । कामप्रति लगनशीलता बढ्ने छ । पठनपाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने छ । तर साँझपख गरेका काममा अवरोध आउने सम्भावना छ । दैनिक कामकाजको चाप बढ्न सक्छ । घरायसी प्रयोजनका विषयमा खर्चबृद्धि र तनाव हुन सक्छ ।
कर्कट– मातापिता वा मान्यजनको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ, गरेका काम सफल हुनेछन् । सम्मान र साख आर्जन गरिने छ । अब कर्मप्रति समर्पित भई भाग्यबल बढाउने समय आएको छ, त्यसैले पेसा वा व्यवसायगत उन्नतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् । चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुने छ । सिंह– परिश्रम गरेमा भाग्यले साथ दिने समय छ । जागिरेले नजानेको वा नचाहेको कार्यक्षेत्रमा समय खर्च गर्नुपर्छ । कुनै अप्रत्याशित काममा धनखर्च हुनसक्छ । आत्मविश्वासमा कमी आए पनि साथीभाइ र सहयोगीको मद्दतले सोचेजस्तै लाभ लिन सकिने छ । पेसा वा व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने मिहिनेत र लगनशीलतामा कमी आउन नदिनु होला ।
कन्या– उतारचढाव आएपनि व्यापारबाट राम्रै नाफा मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा उतारचढाव आउने भएकाले व्यवहारमा संयमता अपनाउनु बेस हुनेछ । गरेका प्रयासमा भाग्यले साथ दिनेछ, साँझपख अचानक हर्षित हुने समाचार मिल्नेछ, परोपकारी काममा खट्नु पर्नेछ । स्वास्थ्य सबल हुनेछ, भाग्यबल बढ्ने छ, रोकिएका काम पुनः बन्न थाल्नेछन् । तुला– मध्याह्नसम्म दाम्पत्य जीवन र प्रणय सम्बन्धमा शुभफल प्राप्त हुनेछ, तर दिउँसो आठौं घरमा चन्द्रमा जाने भएकाले मायाप्रेम, रतिराग र भावुकताका क्षेत्रमा खराब ऊर्जा प्राप्त हुने सङ्केत छ, संयम र सचेत रहनुपर्छ । सानातिना घरायसी समस्याहरू देखिए पनि तिनले दैनिकीमा खास फरक पार्ने स्थिति छैन । जीवनसाथीसित वैचारिक मतभेद हुनसक्छ ।
बृश्चिक – उल्झन सुल्झाउने महत्वपूर्र्ण दिन हो । तर्कवितर्क, वादविवाद, छलफल र पढाइलेखाइका क्षेत्रमा सक्रिय भइने छ । दिनभरि मन प्रफुल्ल रहनेछ । शान्त र रमाइलो वातावरणको सिर्जना हुनेछ । घरायसी सुखसुविधा र मायाप्रेमका लागि समय दिनुपर्ने छ । खानपिन, घुमघाम एवं भेटघाटको बेला छ । दिन छिप्पिंदै जाँदा समय भाग्यशाली हुनेछ । धनु – दिनको सुरुवातमा ज्ञानगुन र बौद्धिकताका क्षेत्रमा मन आकर्षित भए पनि दिउँसो मानसिक चिन्ता र छटपटीले व्याकुल हुन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी र कुरा काट्नेले तपाईंका विरुद्धमा प्रचारबाजी गर्नसक्छन् । घरमा आमा वा दिदीको स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्नसक्छ । काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न समस्या आइलाग्न सक्छन् । मकर– मान्यजनसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । सानातिना घरायसी काममा समय व्यतीत गर्नु पर्नेछ । पारिवारिक वातावरण अनुकूल नहुनाले दिक्क लाग्न सक्छ । आर्थिक मामिलामा नराम्रो छैन । बौद्धिक र सृजनात्मक क्षमता ह्रास आउने छ यद्यपि आजको चिन्तनले थोरबहुत काम गर्नेछ । तर दिउँसोबाट सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । पठनपाठन र ज्ञानगुनका क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने छ ।
कुम्भ – चौथो घरमा चन्द्रमा भए दिन लाभदायक रहनेछ । नयाँ कामधन्दा वा व्यवसाय सुरु गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट मिहिनेत गरेबमोजिम लाभ लिनसकिने छ । सानातिना पारिवारिक समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने छ । शरीरमा थकानको अनुभूति हुसक्छ तथापि घरपरिवार, पारिवारिक सुख, मान्यजनको सेवासुश्रुषामा समय बितेको पत्तो पाउनुहुन्न ।मीन– दिनभरि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्ने समय छ । मनमा उत्साह र उमङ्गमा कमी हुने छैन । घरायसी र पारिवारिक झैझमेलामा पनि केही समय प्रदान गर्नु पर्नेछ । मातापिता वा अभिभावकवर्गका चाहनालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तपाईंको चियोचर्चो गर्ने र कुरा काट्नेको सङ्ख्या बढेको अनुभूति हुनेछ । छोटो यात्रा सफल नै हुन्छ, तर लामो यात्राबाट हानि हुनसक्छ ।
र अन्तमा भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने पान वा घिउ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । साथै
नेपालमा आत्माहत्या गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । अकालमा ज्यान फाल्नेहरुको संख्या बढेपछि हामीले केही दिन यता आत्मा हत्या गर्नुका कारण र यसबाट बच्ने उपायहरुबारेमा चर्चा गरिरहेका छौं । हाम्रा सामाग्री सृखलाबद्ध छन् । आश्यकता अनुसार पढ्न सक्नुहुने छ । म ईश्वरको सन्तान हुँ । मेरो जन्म निराशाको लागि भएकोे हैन । म आफ्नो पितासँग एक हुँ । मलाई अभाव तथा असफलतासँग कुनै भय छैन, किनभने भयको ईश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन । म वीर, साहसि र विजयी हुँ, परिस्थितिको दास होईन । म स्वतन्त्र छु, बन्दी होईन । म कुनै पनि हालतमा आफ्ना शक्तिहरुलाई निराशाको हातबाट नाश हुन दिन्न । म साहस हुँ, शक्ति हुँ, आत्मविश्वास हुँ, तथा स्वयम्पर्ण पुरुष हुँ । निराशा म माथि कुनै वश चल्न सक्दैन, किनभने त्यो केवल दूषित मनको कल्पना हो, सत्य होइन ।
जीवनमा मेरो निराशाले मेरो ईश्वरमाथि कुनै विश्वास छैन र मैले ईश्वरभन्दा बढी कुनै अन्य दानवी शक्तिमा विश्वास राख्छु भन्ने प्रमाणित गर्दछ । जति सुकै कठिनाई आएपनि मेरो काम विश्वासपूर्वक अघि बढ्नु हो । अबदेखि म सारा जीवनको नियन्त्रण, सम्पुर्ण संसारका अभिभावक ती सर्बशक्तिमाथिको हातमा छ भन्ने निश्चय नै गरेर सुत्छु । हाम्रो सम्पुर्ण निराशा र चिन्ताको मुल कारण हाम्रो ईश्वरसँगको भिन्नताको भावना हो, जसबाट हामी संसारमा आफुलाई असहाय, असुरक्षित र एक्लो सम्झन थाल्छौं । सधैं ईश्वरलाई आफ्नो नजिक सम्झिनेहरु ती सम्पुर्ण निराशा र कष्टभन्दा माथि उठ्न पुन्छन् । यस्ता जीवनको प्रत्येक संघर्षलाई प्रगतिको सिंढी सम्झन्छन् । तिनले परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्दछन्, जवकि अन्य व्यक्तिहरु ती संघर्षको मारमुनि दाविन पुग्छन् ।
जीवनका सम्पर्ण आंधी तुफानलाई हाँसीहाँसी सामना गरि असफलता र कठिनाईबाट नष्ट हुनुको सट्टा तिनीहरुलाई आफ्नो प्रेरणा–स्रोत बनाउने व्यत्ति महान हुन् । आफुले आफैलाई भन्नुहोस् मेरो जीवनको सफलता मेरो हातमा छ । कायरता र निराशाको दास बनेर आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउँदिन । म निराशामाथि विजय प्राप्त गर्नसक्छु आज बाटो मेरा आँखाबाट ओझेल भएपनि कुनै चिन्ता छैन । म ईश्वरमाथि विश्वास राखि अघि बढ्दै जानेछु । बाधाहरुको परवाह नगरि म आफ्नो जीवन–डुंगालाई लक्ष्यतर्फ बढाउँदै जानेछु ।
म आफ्नो मनमा हिन भावना आउन दिन्न । यसबाट ईश्वरको महानताको अपमान हुन्छ । म हिन होइन । जीवनका बहुमुल्य बस्तुहरु मेरो प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । म ईश्वर–पुत्र हँु र ईश्वरिय विभुतिहरु मलाई सम्पत्तिको रुपमा मिलेको छ । जब म यस्तो भन्छु, म यो गर्न सक्दिन, म त्यो गर्न सक्दिन, मेरो लागि त्यो असम्भब छ, त्यतिबेला मैले शक्तिहरुकोे उपेक्षा गरिरहेको हुनेछु । अबदेखि म आशावादी बनेर भन्नेछु – म गर्न सक्छु, म गर्नेछु, म गर्न समर्थ छु, । र, त्यतिबेला मेरो शक्तिहरु दोब्बर हुनेछन् । यदि म अनादी र अनन्त ती सच्चिदानन्दको अंश हुँ भने मलाई भयभित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन , म ईश्वरिय सत्ताको एक अंश हुँ । मेरो अस्तित्व विनाश र परिवर्तनभन्दा माथि छ । म अमर छु । फेरि मलाई साधारण कुराहरुबाट डराउनु के आवश्यकता छ ? म परिस्थितिहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छु । मेरो लक्ष्य मेरोसामु छ । मलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । मेरो यो निश्चय अटल छ ।
धेरैजसो मानिस बाइबलका यी पंतिmलाई दोहो¥याउँदै प्रेरणा लिने गर्छन्, ‘ईश्वरको छत्रछायाँमा रहनेहरुलाई ईश्वरले रक्षा गर्दछन । उनको संरक्षणमा बसेर यदि उनीमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यहि विश्वास तपाईको ढाल बन्नेछ ।’यी विलक्षण पंक्तिमा निराश हृदयहरुका लागि कति प्रेरणा भरिएको छ ! आफ्नो मस्तिष्कमा असफलता, निराशा, निरुत्साहको भावनाको स्थानमा उत्साह, आशा र सफलताको विचार गर्नु अत्यन्त मुल्यवान छ र जीवनको प्रसन्नता र रहस्य यसैमा लुकेको छ । मस्तिष्कले एकै समय दुईवटा विरोधि विचार राख्न नसक्ने मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तले हामीलाई आफ्नो भाग्यको पुर्ण स्वामी बनाईदिन्छ जीवनको सफलता–असफलता, उन्नति–अवनति हाम्रो ईच्छाशक्तिमाथि निर्भर गर्दछ । हाम्रो व्यक्तित्व हाम्रो विचारहरुको दर्पण हो । यदि जीवनमा निराश, दुःख र कष्टसँग सँघर्ष गर्नु नपरेको भए जीवन–यात्रा कति सुखमय बन्थ्यो ! तर कठिनाईहरुबाट गुज्रदै जीवनका महान सपनाहरु पुरा गर्नुमै जीवनको महानता छ ।
उत्साह र सफलताको विचारबाहेक सफलताका अन्य कुनै उपाया छैन । आशाको सचनात्मक शक्तिले निराशालाई भगाउनुको साथै नयाँ शक्तिहरु पनि उत्पन्न गरिदिन्छ । प्रत्येक मनुष्य आफु स्वयम्मा यी शब्द दोहो¥याएर शक्ति र साहसलाई दुई गणा बढाउन सक्छ—‘म जगत्—नियन्ताको सन्तान हुँ, त्यसैले मलाई डराउनु आवश्यक छैन र म गर्दिन पनि । म सत्य हु, म साहस हुँ, मलाई कुनै डर छैन, किनभने म ईश्वरसँग एक भईसकेको छु । मेरो जीवनमा कुनै असफलता आउनै सक्दैन किनभने मेरो सम्बन्ध सफलताको त्यो अनादि स्रोतसँग छ ।’